Saafi Films - News: (DAAWO SAWIRO)Ciidamada Kenya oo Maanta Nairobi ku qabtay Rag Soomaali ah, Jaakadaha Qarxa iyo ,Qoryaha AK-47
(DAAWO SAWIRO)Ciidamada Kenya oo Maanta Nairobi ku qabtay Rag Soomaali ah, Jaakadaha Qarxa iyo ,Qoryaha AK-47
Ciidamada Booliiska Dalka Kenya ayaa maanta Xaafada Islii ee Soomaalidu ka dagantahay Magaalada Nairobi waxa ay gacanta ku dhigeen Hub iyo Rasaas ,Jakaado walxaha qarxa ku xirnaayeen iyo Labo Nin oo Soomaali ah.
Ciidaman ayaana la sheegay in Howl gal gaar ah kasameeyeen Xaafad kamid ah Islii oo lagu wargaliyay in Hubka iyo Walxaha Qarxa yaalaan lagunma qorsheenayo falal argagaxiso oo lidi ku ah Amaanka Dalka Kenya.
Ciidamada la Dagaalanka Argagaxisad oo Hoolgalkan fuliyay ayaa waxa ay kusoo qabteen Howlgalkooda afar qoriga AK47, iyo rasaas,iyo Jaakado ay ku xirnaayeen Walxaha Qarax oo la sheeagy in la doonayay in lagu weewearo kaniisado kuyaaala Magaalada Niarobi.
Afhayeenka Ciidamada Booliska Eric Kimathi ayaa maanta Warbaahinta Niarobi ugu soo bandhigay Hubkaan iyo Walxaha qarax ay qabteen iyo labo Nin oo Soomaali ah oo la sheegay in ay katirsanaayeen Dagaalyahnada Al-Shabaab.
Afhayeenka waxa uu intaa ku daray in Howlgalkan uu ahaa mid gaar ah ay fuliyeen Ciidamada amaanka kana sameeyeen Xaafada Soomaalidu ku badantahay ee Isklii kuna soo qabteen 4-qori oo ah nuuca AK-47 �Lix jaakadaha walxaha qarax ,Rasaas Badan iyo waxyaabo kale oo Qaraxyada loo adeegsado.
Booliiska Kenya ayaana shabaab ku eedeeyay Hubkaan iyo walxahaan Qaraxaa in ay lahaayeen ayna doonayeen Falal Argagaxisdo in ay ka geestaan Magaalada Nairobi gaar ahaan ay weeraraan Goobaha Kaniisadaha ah ay ku cibaadeestaan Dadka Gaalada ah.
nasro on September 14 2012 ·
4,957,595 unique visits